Global Voices teny Malagasy » Tontolo iainana : Resaka rano ao Afrika Atsinanana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Jolay 2018 16:26 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rotich Nandika (fr) i Claire Ulrich, imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Atsimo, Kenyà, Oganda, Tanzania, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Siansa, Tontolo_iainana
Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2008
Mahaliana ny blaogera ao atsimo sy atsinanan'i Afrika ireo olana mikasika ny rano tamin'ny fampiatoana ny matihanina amin'ny kalitaon'ny rano ao Afrika Atsimo, teknolojia vaovao mba hakana rano sy hamadihana azy ho azo sotroina, ary ny ”fifanenjehana amin'ny fanonjoana trondro” any amin'ireo farihin'i Afrika Atsinanana [amin'ny teny anglisy daholo ireo blaogy rehetra voatanisa]
Sary avy amin'i Julien Harneis  ao amin'ny Flickr, nampiasàna lisansa Creative Commons
Manomboka ity fitetezana blaogy ity miaraka amin'i Afrika Atsimo isika, izay anehoan'ny blaogy hevitra momba ny fanesorana ny Dr Anthony Turton. Mpikaroka ary tokony nandray fitenenana nandritra ilay fivoriana ”Science Real and Relevant” (Ny Siansa mivaingana sy ilaina) tao Pretoria ny Dr Turton. Voasakana tamin'izany izy ary, taty aoriana, notsoahan'ny Filankevitry ny Fikarohana Siantifika sy Indostrialy – Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) tamin'ny asany.
Mizara ny fanambarana ofisialin'ny CSIR ilay blaogera, fa namaky ihany koa ny fanoloran'i Dr. Turton  izy [pdf ao amin'ny environment.co.za], ary manao fanamarihana:
Tamin'ny famakiana antsipirihany ilay fanambaran'i Dr Turton, [hita fa] nabaribariny ny fomba nahatonga ny tsy fahampiana famatsiambola tamin'ny fikarohana sy ny teknolojia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 90, ny fanapahana ireo fandaharanasam-pikarohana lehibe sy ny fiampitana mankany amina modely ara-toekarena mifototra amin'ireo fifanarahana famatsina ny rano ho lasa nisy ” fiantraikany mampivarahontsana” eo amin'ny fahafahan'ny firenentsika hiatrika ireo fanamby teknika apetraky ny kalitaon'ny ranontsika.
Miresaka momba ny fahaleovantenan'ireo mpikaroka maniry ny hanolotra ny fehin'ireo asany koa ilay tranga. Mitatitra ny fanehoankevitry ny mpanao gazety siantifika iray momba ilay fanesorana ny Dr Turton ny Urbansprout .
Nanambara ny Dr George Classen, mpanao gazety siantifika ary filoha teo aloha an'ny departemantan'ny fanaovana gazety tao amin'ny oniversiten'i Stellenbosch, fa tena ”mahamenatra tanteraka” iny fanafoanann'ny CSIR iny firotsahana an-tsehatra iny. Tena fandikana lehibe ny fahaleovantenan'ireo mpikaroka sy ny zony hizara ny valin'ny fikarohana nataony izany, na dia manaitra ny masontsika tahaka ny inona aza”. Manampy i George Claassen fa azo antoka ao amin'ny toko faha-16-n'ny Lalàm-panorenena ny fahaleovantenan'ny fikarohana, izay milaza fa samy manana zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra avokoa ny tsirairay, tafiditra ao anatin'izany koa ny fikarohana any amin'ny oniversite sy ny fikarohana siantifika
Manome ilay rohy mankany amina fanangonan-tsonia an-tambajotra ho fanohanana ny Dr Turton  ny Urbansprout ary mamarana:
Asongadin'ilay tatitr'i Turton fa toa mety hiatrika krizin-drano i Afrika Atsimo, na amin'ny resaka fahazoana na ny kalitaony izany, izay hisy fiantraikany tena ratsy eo amin'ny ffitomboana ara-toekarena sy ny fandrosoan'ny firenena, ary mety hitondra mankany amin'ny fikorontanana ara-tsosialy ihany koa. Ireo famintinany ireo dia mifanohitra amin'ireo fanambarana farany nataon'ny fanjakana fa tsy hiatrika krizin-drano mitovy amin'ilay krizy misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny sehatry ny fizarana herinaratra i Afrika Atsimo.
Manome vaovao bebe kokoa mikasika ireo olan'ny rano ao Afrika Atsimo ny lahatsoratra taloha nosoratan'ny Urbansprout , voamariky ny fitetevan'ireo toby fanadiovana any amin'ireo riandrano. Mamatsy avy hatrany ny tambajotra fizarana rano madio ny rano avy amin'ireo renirano ireo.
Raha amin'ny lafina teknolojika, faritan'ny blaogy BLDG ny WaterMill  ho toy ny teknolojia vaovao ”mampiasa ny angovo herinaratra mitovy amin'ny takamoa telo eo noho eo mba hampifintina ny hamandoan'ny rivotra, hisambotra izany ary hanadio azy mba hahafahana misotro izany” . Omen'i Rory avy ao amin'ny blaogy Carbon Smart  ny rohy mankany amin'ny BLDG  , manadihady ireo ‘teknika-bitika’ toy ny an'ny WaterMill, ary manontany tena izy raha toa ka afaka hanome rano madio ho an'ireo tanàna io. Manoratra izy:
Mitondra antsika mankany amina vinany ny resaka momba ny WaterMill  — fitaovana kely mpanala hamandoana izay misambotra sy manadio ny ranon'ny rivotra – : ampahany inona amin'ny fanjifantsika rano madio no mety ho avy amin'ny rivotra? Mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny toetrandro bitika an-tanandehibe ve ny fametrahana dika aman'arivony amin'ity fitaovana mitsitsy angovo ity? Afaka mihevitra ve isika hoe ny Watermill aman'arivony dia mety ho afaka hanome antsika fahafahana tsy hampiasa fitaovana fandrindràna hafanàna (climatiseurs) mandany angovo be amin'ny fandraisana anjara amina tontolo iainana malefadefaka kokoa, ampiana fanaovana trano sy akanjo mifanaraka amin'izany, ny fambolena zavamaitso amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe sy ny fampihenana ny hamandoana manodidina antsika ?
Ao Afrika Atsinanana, averin'ny blaogy keniana Kenvironews  ny lahatsoratra nosoratan'i Namhla Matshanda, avy ao amin'ny fandaharanasa African Security Analysis. Adihadian'ity lahatsoratra ity ny fifandirana izay ny ventiny amin'izany dia ny nosy Migingo ao amin'ny farihy Victoria , takian'ny Ogandà sy Kenya.
Manomboka lasa loharanom-pifandirana eo amin'ireo firenena mizara ilay farihy ny ”fifanenjehana amin'ny fanonjoana trondro” toy ny iantsoana azy, ao amin'ny farihy Victoria, izay mety hanakorontana ny fitoniana ao amin'ny faritra. Nanaratsy kokoa ny fihenjanana eo amin'i Oganda, Tanzania sy Kenya ireo trangan-javatra maro niseho nanodidina ilay farihy nandritra ireo volana maro lasa. Mazava ankehitriny fa ny tsy fisian'ny sisintany voapetraka mazava tsara manelanelana ireo firenena telo mifampizara ilay farihy ireo no loharano fototra mahatonga ireny trangan-javatra ireny.
Hatramin'ny 2003, nosamborin'ireo manampahefana tanzaniana na ogandey ireo keniàna mpanjono ary nogiazan-dry zareo ny sambo sy ny fitaovana, noho ny ”fandikana tsy ara-dalna ireo sisintany iraisana”. Ny tranga farany nisy dia rehefa noroahan'i Oganda tao amin'ny nosin'i Migingo ireo keniana 400 mpanjono. Takian'i Oganda sy Kenya i Migingo. Mampihenjana ireo fifandraisana efa mihenjana eo amin'ireo firenena roa ireo ilay trangan-javatra. Nangataka ireo mpitondra politikany mba hirotsaka an-tsehatra ireo keniana mpanjono ary efa nandrahona ny hampiasa herisetra mihitsy aza ny sasany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/28/123346/
 Dr. Turton: http://www.environment.co.za/documents/water/KeynoteAddressCSIR2008.pdf
 fanangonan-tsonia an-tambajotra ho fanohanana ny Dr Turton: http://petition.environment.co.za/
 lahatsoratra taloha nosoratan'ny Urbansprout: http://www.urbansprout.co.za/sewage_seepage_the_water_crisis_continues
 farihy Victoria: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Victoria